Awoowe soomaaliya oo u geeriyooday jidh-dil loogu geystay Minneapolis+Booliska oo wiil 23-jir ah u soo xidhay | Caroog News
Awoowe soomaaliya oo u geeriyooday jidh-dil loogu geystay Minneapolis+Booliska oo wiil 23-jir ah u soo xidhay
Awoowe soomaaliyeed oo 75 jir ahaa islamarkaana lagu magacaabay Shirwac Hassan Jibril ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar uu ku qaaday wiil madow ah kadib markii ay ku dhex murmeen bas ka dhex shaqeeya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, USA.
Leroy Davis-Miles oo 23 jir ah ayay boolisku u soo qabteen fal-dambiyeedkan uu ku baxay awoowe Shirwac kaas oo dhacay labo isbuuc ka hor, waxaana ay wararku sheegayaan in awoowe Shirwac uu soo fuulay bas ay saarnaayeen dhallinyaro uu ka mid ahaa Leroy kuwaas oo ku dhex qeylinayay baska, markii uu ka codsaday in ay buuqa yareeyaana la hujuumay.
Awoowe Shirwax markii uu baska uga dagay halka loo yaqaan Chicago-Lake Transit Center, ayay dhallinyaradu ka daba dageen, waxaana wiilka iminka la soo xiray uu wajiga feer kaga dal-dalay awoowe shirwac kaas oo dhulka durba ku dhacay.
Leroy ayaa asxaabtiisa xabadka-xabadka u saaray kadib markii uu feer dhulka la dhigay awoowe Shirwac, waxaana asxaabta qaar ay markaasi bilaabeen in ay baartaan jeebabka awoowe Shirwax ka hor inta aysan goobta ka baxsan.
Awoowe Shirwax oo isbitaalka Hennepin County Medical Center loola cararay ayaa maalmo kadib ku geeriyooday halkaasi, waxaana ay boolisku sheegeen in uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray dhanka madaxa iyo maskaxda.
Awoowe Shirwac ayaa ifka kaga tagay 8 xarruur ah iyo 7 uu awoowe u ahaa, waxaana lagu sheegay xilliga la weeraray uu ka yimid dhanka masjidka oo uu kusoo tukaday mid ka mid ah salaadaha.